Imisa qaxooti ah ayaa Sweden soo galaya sanadkaan? | Somaliska
Iyadoo sanadkii hore ay Sweden iska dhiibeen dad kor u dhaafaya 160.000 qof oo qaxooti ah, ayaa sanadkaan la filayay in ay ka badan boqolkun iska dhiibi doonaan wadanka balse xaalada ayaa si weyn isku badashay, ka dib markii ay Sweden xuduudaha xiratay isla markaan wadamada kale ee ilaa Greece ay xireen xuduudahooda.
Qaadashada cayrta ma lagu tilmaami karaa dawarsi?
July 26, 2016 at 06:55
Asc qaxoti le la leyahay awe dadka wax xarayste wali ayaga jwbna an helin wayo dad badan ayaa jwb la
Asc akhayaarta ayaan taan yaa jawab helay aaway dadkii 2 sano lagu heestay xageey galeen shi shibta waa maxay tack!
Rabitalk kufilan says:
July 30, 2016 at 12:44
Was salmo abaay afkiibaa Judas gabay
Afkiibaa j uuqda gabay
Asc dadka 2 sano wax war helay ma jiraan?Aniga ninkeyga interviu u sugaa. Ilaah ha noo wada sahlo wixi kheer ah.
August 13, 2016 at 11:14
Dadka diid mada heysto waxaan kula talin lahay haku dhuminin waqtigada meel cidla ah paris ayeey kashidan tahay kana ceyr badan kana shawo badan